Vietnam: Mihoatra Ny 500 Ireo Olona Nanatrika Ny Barcamp Tao Saigon · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2011 5:40 GMT
Natao ny Alahady farany teo, izany hoe ny 24 jolay tao amin'ny RMIT, Anjerimanontolo iraisam-pirenena ao an-tanànan'i Ho Chi Minh ao Vietnam ny fihaonam-be fahefatra natao hifanakalozan-kevitra tao Saigon (Barcamp) . Barcamp lehibe indrindra tao Saigon izy io raha jerena eo amin'ny habetsaky ny mpanatrika. Nankasitraka ny fandraisan'anjaran'ireo olona maro be ny mpikarakara izany.
Isaorana sahady ny tsirairay avy tamin'ny fanatanterahana ity Barcamp teto Saigon ity (izay natrehan'ny olona miisa 570)! Mankatelina tokoa izahay tamin'ny fandraisan'anjaran'ny olona maro be teo amin'ny fifanakalozana sy adihevitra. Ny irianay ekipa mpikarakara ny BarcampSaigon dia ny fisokafan'ity BarcampSaigon ity ho an'ny be sy ny maro, ny mba hahazoan'izy ireo fahafinaretana, ary mba hahazoan'ny tsirairay traikefa.
Barcamp Saigon 2011 avy ao amin'ny pejy Facebook -n'i Preetam Rai
Navoitran'i ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Saigonist ny asa aman-draharaha sy ny zava-niseho tao amin'io Barcamp io
Sondriana tokoa ireo vahiny avy any ivelany. Tena isaorako ireo bandy akama avy any Kambodia, Sina, Azia atsimo, Alemana, sns… izay nitondra ny traikefany taty Saigon tao amin'io Barcamp io ary nizara izany tamintsika. Ny any ivelany matetika no mpanatanteraka an'io Barcamp io. Manolotra antsika hevi-baovao eo amin'ny resaka teknolojia ihany koa ireo vahiny avy any ivelany ireo. Ary faly aho raha nahita fa farafaharatsiny nahaliana ireo vahiny mpanotrona avy any ivelany ny hevitra sasantsasany avy teto an-toerana.
Tsy fifanakalozan-kevitra no tao anatin'io Barcamp io. Betsaka ireo olona no mifampitarika sy mifanakalo hevitra tany ivelan'ny fivoriana. Ny asan'ny mpikarakara dia tsy ny mibaiko hoe anjaran'iza no miteny, tsy toy ny fahita mahazatra any aminà fihaonam-be. Ny anjara asanay dia ny manolotra sehatra iray ho an'ny tsirairay hahafahany mizara ny fahalalàny ho an'ireo izay liana amin'izany. Ny paikady amin'izany, antenaiko, dia ny hahatsapan'ny olona maro fa manana fahalalàna izay mahaliana izy ireo ary mendrika ho zaraina, ary dia manome azy ireny ny fotoana hahafahan'izy ireo milaza ny heviny manoloana ny mpihaino sy mamelabelatra ny heviny rehefa asaina maneho izany ery aloha izy ireo , sy mahazo ny tamberina avy amin'ireo vahiny, eny fa na dia mbola tsy nihaona tamin'izy ireo aza.
Ny fomba fijerin'ireo mpanao ‘twit’ sasantsasany
@MoodyRain @welivetoplay Tongasoa ianareo. Mahazoa fahafinaretana! Mahafinaritra ny mahita ny #barcampsaigon miparitaka hatrany Amsterdam!
@barcampSaigon Tapitra ny #barcampsaigon Lohataona 2011, fa efa nahazo mpamatsy vola miisa 4 sahady isika ary ekipa 1 hafa handray anjara amin'ny fotoanan'ny Ririnina 2011.
Ny sasany tamin'ireo lohahevitra noresahana tao amin'io Barcamp io dia ny fakàna tahaka, ny fampiasàna twitter any an'efitrano fianarana, lahatsary fampianarana ny fiainana andavanandro amin'ny fiteny Vietnamiana, ny fahafahana mamorona fanombohan-javatra, fiaraha-miasa sy paikady, fangalàna sary eny an-dalambe. Ary Inona moa no maharatsy ny fanànana namana mihoatra ny 500 ao amin'ny Facebook?
Navoaka tao amin'ny Facebook sy Flickr ny sary tamin'ilay Barcamp .